Niala tsiny tamin'i Kurt Angle i Edge noho ny hiran'ny 'You Suck' - Wwe
Niala tsiny tamin'i Kurt Angle i Edge noho izy nanomboka ny tonon-kira 'You Suck'
Edge sy Kurt Angle dia kintana roa lehibe indrindra nandritra ny vanim-potoanan'ny WWE's Attitude Era. Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny toetran'ny Toe-tsaina dia ny hira 'You Suck', notarihin'ny Edge for Angle.
Nanomboka ho fanozonana ilay Medaly Gold Olimpika ilay hira, saingy nanjary sary an'ohatra niaraka tamin'ny mozika loha-heviny rehefa nandeha ny fotoana.
inona no hatao rehefa mankaleo aho
Vao haingana i Kurt Angle no nandefa horonantsary tao amin'ny Instagram, nizara ny niandohan'ny hira 'You Suck'. I Angle koa dia nisaotra tamim-panesoana an'i Edge tamin'ny fanombohana ny fihirana.
'Ahoana no nanombohan'ny hiranao You Suck. Misaotra betsaka Edge. #marina izany '
Lahatsoratra iray nozarain'i Kurt Angle (@therealkurtangle)
Nahazo valiny betsaka ity lahatsoratra ity, anisan'izany ny iray avy any Edge, mpamorona ny tononkiran 'You Suck'. Ny Rated-R Superstar dia nifona tamin'ilay hira ary koa naneho hevitra momba ny safidiny lamaody tamin'izany fotoana izany, izay nantenainy fa hahatsapa ho tsara kokoa i Angle.
Miala tsiny Kurt. Tiako enao. Mahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa noho ny anaovako pataloha pleather sy bokotra spandex mando. '
Niala tsiny tamin'i Kurt Angle i Edge
Nanomboka indray alina ny fihirana tao amin'ny RAW, toerana nanapahan'i Kurt Angle hampiseho ny t-shirt vaovao. Mampalahelo fa tompon-daka tamin'ny WWE teo aloha i Edge, nanakorontana ilay fanambarana, nanova ireo teny teo amin'ilay tee-shirt ho 'You Suck'.
Nandany ny fotoanany izy, saingy mahafinaritra ny mahita an'i Edge miala tsiny noho ny iray amin'ireo tononkira lehibe indrindra amin'ny Fanjakan'ny toetr'andro.
raiki-pitia vs mitia olona
Kurt Angle mino ny kintana NCAA no Brock Lesnar manaraka
Kurt Angle dia iray amin'ireo mpiady mahery indrindra amin'ny fotoana rehetra, ary iray amin'ireo mpifaninana aminy lehibe indrindra dia i Brock Lesnar. Hatramin'ny androm-boninahitr'izy ireo dia samy nisaraka tamin'ny WWE i Angle sy i Lesnar, saingy mino ny Medaly Gold Olimpika fa ny kintana mpiady NCAA no mety ho Lesnar manaraka.
Vao haingana i Angle no naneho hevitra momba ny iray amin'ireo fanantenana tolona lehibe indrindra - Gable Steveson. Nampitahain'i Angle taminy tamin'i Brock Lesnar, izay nitolona tamin'ny University of Minnesota ihany koa.
'Heveriko fa ho kintana lehibe izy. Jereo ny fijeriny. Raha zatra manao tolona pro izy ary maka azy toa an'i Brock Lesnar dia hitovy tanteraka amin'i Brock Lesnar izy, 'hoy i Angle. 'Noho izany, heveriko fa mila manararaotra izy. Na mandeha any MMA na WWE izy, iray na iray hafa, fa mila manao ny iray amin'izy ireo izy. Heveriko fa kintana ho avy izy na inona na inona ataony. Tena nibanjina azy izy. Atleta mahafinaritra. '
Steveson tenany ihany no mino fa izy no zavatra lehibe manaraka mankany WWE.
bray wyatt avelao aho hiditra
Izaho no ho kintana lehibe indrindra @wwe efa nanana.
- Gable Steveson (@GSteveson) 28 martsa 2021
Kurt Angle dia mpitsara tsara amin'ny fahaizan'ny olona mitolona. Ahoana ny hevitrao momba ny mety ho vitany Gable Steveson? Ampahafantaro anay eto ambany.
ahoana ny fomba fiderana bandy amin'ny endriny
tononkalo momba ny famoizana olon-tiana tampoka
inona no holazaina fa tsy miala tsiny amin'ny fahavoazanao
manapaka fifandraisana maharitra
famolavolana fehin-kibo eran-tany wwe
inona ny ohatry ny jiro entona
zava-misy tokony ho fantatrao momba ny fiainana